Naijeria - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Agha obodo Naịjirịa (nke a makwaara dị ka agha Biafran na nke Naijirịa-Biafran) bụ agha obodo na Naịjirịa lụrụ n'etiti gọọmentị Naịjirịa nke General Yakubu Gowon bụ onye isi ala na steeti Biafra nke Lt. Colonel Odumegwu Ojukwu bụ onye isi nke 6 Julaị 1967 ruo 15 Jenụwarị 1970.  Biafra nọchitere anya agbụrụ ndị Igbo, nke ndị ndu ha chere na ha enweghịzi ike ibikọ ọnụ na gọọmentị etiti nke ugwu.  Esemokwu ahụ sitere na esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke akụ na ụba, nke agbụrụ, nke ọdịbendị na nke okpukpe nke bu ụzọ tupu Britain amalite ịchị Naijiria na 1960 ruo 1963. Ihe butere agha ahụ na 1966 gụnyere ọgbaghara agbụrụ na okpukperechi agbụrụ na Northern Nigeria,  ibu agha, imegide ọchịchị na mkpagbu nke ndị Igbo bi na Northern Nigeria. Njikwa nchịkwa mmanụ na-eweta ezigbo ego na Niger Delta rụkwara ọrụ dị mkpa.
N’ime otu afọ, ndị agha Gọọmentị Etiti gbara Biafra gburugburu, weghara ebe a na-egwupụta mmanụ dị n’ụsọ osimiri na obodo Port Harcourt. Ihe mgbochi a machibidoro n'oge sochirinụ kpatara oke agụụ. N'ime afọ abụọ na ọkara nke agha ahụ, ihe ruru 100,000 ndị agha nwụrụ n'ozuzu ya, ebe ndị nọ na Biafra nwụrụ ihe dị ka nde 500,000 na 2 nde. 
N’etiti afọ 1968, onyonyo nke ụmụaka Biafra nke agụụ na-agu nri na agụụ na-agụgbu juputara na mgbasa ozi mgbasa ozi nke mba ndị dị n’Ebe Ọdịda Anyanwụ. Ọnọdụ nke ndị Biafra agụụ na-agụ agụụ ghọrọ ihe kpatara nsogbu na mba ofesi, na-eme ka ịrị elu na nkwado nke ndị otu na-abụghị ndị gọọmentị na mba ụwa (NGO). United Kingdom na Soviet Union bụ ndị na-akwado gọọmentị Naịjirịa, ebe France, Israel na ụfọdụ mba ndị ọzọ kwadoro Biafra. Agha Obodo Nigeria Akụkụ nke nhazi Africa. Biafra independent state map-en.svg The de facto independent Republic of Biafra in June 1967. Date	6 July 1967 – 15 January 1970 (2 years, 6 months, 1 week and 2 days) Location	Nigeria Result	Nigerian victory Territorial changes	Biafra rejoins Nigeria Belligerents
Supported by: Supported by: Commanders and leaders Nigeria Hassan Katsina Nigeria Mohammed Shuwa Nigeria Benjamin Adekunle Nigeria Theophilus Danjuma Nigeria Shehu Musa Yar'Adua
Nigeria Yakubu Gowon Nigeria Murtala Mohammed Nigeria Olusegun Obasanjo Nigeria Muhammadu Buhari Nigeria Ibrahim Babangida (WIA) Nigeria Sani Abacha	Biafra Odumegwu Ojukwu Biafra Philip Effiong
Biafra Rolf Steiner Biafra Jan Zumbach Biafra Lynn Garrison Biafra Taffy Williams Republic of Benin (1967) Albert Okonkwo Biafra Victor Banjo Skull and Crossbones.svg Biafra Ogbugo Kalu Biafra Joseph Achuzie Biafra Timothy Onwuatuegwu †Biafra Humphrey Chukwuka Strength Nigeria Nigerian troops: 85,000–150,000 (1967) (Possibly 100,000) 250,000 (1968) 200,000–250,000 (1970)	Biafra Biafran troops: 10,000–100,000 (1967) (Possibly 30,000) 110,000 (1968) 50,000–100,000 (1970) Casualties and losses Military killed: 45,000–100,000 killed
Refugees: 500,000–3,000,000 Nkewa agbụrụ Enwere ike ijikọta agha obodo na njikọta nke colonial na 1914 nke Northern protectorate, Lagos Colony na Southern Nigeria protectorate (nke emesịrị nyeghachi aha ya na East Nigeria), ezubere maka nchịkwa ka mma n'ihi nso nso ndị nchebe a. Agbanyeghị mgbanwe ahụ echebaghị iche na ọdịbendị na okpukperechi nke ndị mmadụ na mpaghara ọ bụla. Asọmpi maka ike ọchịchị na nke akụ na ụba mere ka esemokwu ka njọ. 
Nigeria nwereonwe si United Kingdom na 1960, nke nwere ọnụọgụ nde 60, nke mejupụtara ihe karịrị agbụrụ 300 na agbụrụ dị iche iche. Mgbe ekepụtara ala nke Naijiria, agbụrụ atọ kachasị buru ibu bụ ndị Igbo, ndị hibere ihe dịka 60-70% nke ndị bi na ndịda ọwụwa anyanwụ;  ndị Hausa-Fulani nke Sokoto Caliphate, bụ ndị hiwere ihe dịka 65% nke ndị bi na mpaghara ugwu nke mpaghara ahụ;  na ndị Yoruba, bụ ndị guzobere ihe dị ka 75% nke ndị bi na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ.  Agbanyeghi na otu ndi a nwere ala nke aka ha, site n’afo 1960, ndi mmadu gbasasiri na Nigeria dum, agburu ato ndi a putara n’obodo ukwu. Mgbe agha dara na 1967, ndi igbo ka di puku ise di na Lagos. 
Ọ bụ ndị isi ala Alakụba na ndị Alakụba-Fulani ndị nọ na North na-achị ndị isi ala na-achịkwa ọdịnala Alakụba gụnyere ndị eze nwere onwe ha n'aka nke ha. A na-ahụta Sultan a dịka isi iyi nke ike ọchịchị na ikike ọchịchị niile. 
Usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị Yoruba na ndịda ọdịda anyanwụ ọdịda, dịka nke ndị Hausa-Fulani, nwekwara usoro ndị eze, ndị Oba, Ndi eze ndị Yoruba, agbanyeghị ọchịchị nke ndị ugwu.  Usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta ọha na eze nke ndị Yoruba kwere ka enwekwu ike imegharị, na-adabere n'inweta karịa inweta akụ na ụba na aha. 
N’adịghị ka otu abụọ ndị ọzọ, ndị Igbo na agbụrụ ndị Niger Delta dị na ndịda ọwụwa anyanwụ biri ọkachasị n’obodo ndị kwụụrụ onwe ha, ndị a na-ahazi nke ọchịchị onye kwuo uche ya, n’agbanyeghi na enwere eze ma ọ bụ ndị eze n’ọtụtụ obodo ochie, dị ka alaeze Nri. Na zenith ya alaeze na-achịkwa ọtụtụ ala Igbo, gụnyere mmetụta na ndị Anioma, Arochukwu (nke na-achịkwa ịgba ohu na Igbo), na ala Onitsha. N’adịghị ka mpaghara abụọ ndị ọzọ, ọ bụ ọgbakọ izugbe mere ụmụnwaanyị na ụmụ nwanyị na-eme mkpebi n’etiti obodo. 
Usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche n'etiti ndị obodo atọ a gosipụtara ma mepụta omenala na ụkpụrụ dị iche iche. Ndi Hausa-Fulani na-achi, ebe ha nwere usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị nanị site n’isi obodo nke onye Emir ma ọ bụ otu onye n’okpuru ya kpọrọ, eleghị ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị anya dị ka ndị nwere mmetụta. A ga-edozi mkpebi ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ usoro okpukperechi na ọchịchị ndị ọzọ, enyere ndị dị njikere ido onwe ha n'okpuru ndị isi na ndị isi. Otu ọrụ dị mkpa nke usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị a na gburugburu ebe a bụ iji kwado ụkpụrụ omume na-achọghị mgbanwe, nke mere ka ọtụtụ ndị Hausa-Fulani lelee mmepe akụ na ụba na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ha anya dị ka nke na-emebi iwu ma ọ bụ na-akwadoghị.
N’adịghị ka ndị Hausa-Fulani, ndị Igbo na ndị Biafra ndị ọzọ na-esonyekarị aka na mkpebi ndị metụtara ndụ ha. Ha maara nke ọma banyere usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma were ya dị ka ngwa iji mezuo ebumnuche ha. Edere ọnọdụ site n'ikike ikpezi esemokwu nwere ike ibilite n'ime obodo, na site n'inweta kama iketa akụ na ụba. Ndi Igbo emegbuela nke ukwuu na ahia ohu nke Atlantic; n'afọ 1790, a kọọrọ na mmadụ 20,000 na Bonny na-ere kwa afọ, 16,000 bụ ndị Igbo.  Site na mmesi ha ike banyere mmachi mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị Igbo gbanwere ma wee maa aka mgba ọchịchị dị iche iche. 
Ndi ochichi colonial iche iche na Naijiria mere ka ndi mmadu ghara idi iche. Na North, gọọmentị ndị ọchịchị hụrụ na ọ dị mfe ịchị achị site na Emirs n'ụzọ na-enweghị isi, si otu a na-adịgide kama ịgbanwe usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị amaala. Ewezuga ndị ozi ala ọzọ nke Ndị Kraịst na North, mpaghara ahụ wee bụrụ nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọchịchị alaeze Europe. N’aka nke ọzọ, ndị kacha baa ọgaranya n’Igbo na-ezigakarị ụmụ ha nwoke na mahadum ndị Britain, na-eche echiche ịkwadebe ha ka ha na ndị Britain rụkọọ ọrụ. N'ime afọ ndị sochirinụ, ndị Northern Emirs jigidere ọdịnala ọdịnala ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke ọdịnala ọdịnala ha, ebe ha na-ewusi usoro mmekọrịta ha. N'oge nnwere onwe na 1960, North bụ ebe kachasị na-emepe emepe na Nigeria. Ọ nwere ọnụ ọgụgụ mmuta na Bekee nke 2%, ma e jiri ya tụnyere 19.2% na East (mmuta na Ajami (asụsụ obodo n'asụsụ Arabic), mụtara n'ihe metụtara agụmakwụkwọ okpukpe, dị elu nke ukwuu). Ọdịda Anyanwụ West nwekwara ọmarịcha ọkwa ọgụgụ na ọkwa ka elu, ebe ọ bụ akụkụ mbụ nke obodo inwe kọntaktị na agụmakwụkwọ ọdịda anyanwụ, wee hiwe usoro agụmakwụkwọ bụ isi n'efu n'okpuru gọọmentị mpaghara Ọwụwa Anyanwụ tupu nnwere onwe.  
N'ebe Ọdịda Anyanwụ, ndị ozi ala ọzọ ahụ webatara ụdị agụmakwụkwọ dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ ngwa ngwa. N'ihi nke a, ndị Yoruba bụ ndị izizi nọ na Naịjirịa nabatara usoro ọchịchị obodo dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ .wa. Ha mejuputara klas mbu nke ndi oru bekee, ndi dibia bekee, ndi oka iwu na ndi oru aka ndi ozo.
Na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ, e webatara ndị ozi ala ọzọ n'oge na-adịghị anya n'ihi na ọ na-esiri ndị Britain ike iguzobe obodo ndị kwụụrụ onwe ha.  Otu o sila dị, ndị Igbo na ndị Biafra ndị ọzọ rụsiri ọrụ ike na agụmakwụkwọ Western, ha wee bịa nabata Iso Christianityzọ Kraịst. Nrụgide ndị mmadụ n’obodo ndị Igbo, tinyere ọchịchọ a na-akwụ maka ego ego, dupụtara ọtụtụ puku ndị Igbo n’obodo ndị ọzọ dị na Naịjirịa ịchọ ọrụ. Ka ọ na-erule n’afọ ndị 1960, ọdịbendị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị Igbo dị n’otu ma nwee ọganiihu n’ogologo, ebe ndị ahịa na ndị gụrụ akwụkwọ na-arụ ọrụ ọ bụghị sọọsọ n’ebe ọdịnala Igbo East, kamakwa na Naịjirịa niile.  Ka ọ na-erule afọ 1966, agbụrụ na okpukperechi dị iche iche dị n'etiti ndị ugwu na ndị Igbo agwakọtara na mgbakwunye ọzọ site na agụmakwụkwọ na klaasị akụ na ụba. 
Ọchịchị na akụnụba nke gọọmentị etiti Ọchịchị ndị colonial kewara Naịjirịa na mpaghara atọ — North, West na East - ihe mere ka esemokwu agbụrụ na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke kawanye njọ n'etiti agbụrụ dị iche iche nke Nigeria. E kewara mba ahụ n'ụzọ nke na North nwere ọnụ ọgụgụ dịtụ elu karịa mpaghara abụọ ndị ọzọ jikọtara. Enwekwara nke oma banyere akuko wayo n'oge onu ogugu mbu nke Naijiria,  ma rue taa onu ogugu ndi mmadu ka bu oke okwu ochichi nke di na Naijiria. Na ndabere a ka ekenyeere mpaghara ugwu ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke oche ndị omebe iwu Federal nke ndị ọchịchị colonial guzobere. N'ime otu mpaghara atọ ndị agbụrụ kachasị, Hausa-Fulani, Yoruba na Igbo, hibere otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke kachasị na mpaghara ma dabere na njikọ agbụrụ: Northern People's Congress (NPC) na Nọt; ndị otu Action dị na ndị ọdịda anyanwụ (AG); na National Council of Nigeria na Cameroons (NCNC) na Ọwụwa Anyanwụ. Ndi otu a adighi iche karia otu nwoke na ndi mmadu; Mgbasasị nke Nigeria kpatara n'ụzọ bụ isi na ndị otu a dabere n'ụzọ bụ isi n'otu mpaghara na otu ebo. 
Ndabere nke Nigeria nke oge a hiwere na 1914, mgbe Britain jikọtara Northern na Southern protectorates. Malite na Northern Protectorate, ndị Britain tinyere usoro nke usoro iwu na-enweghị isi nke ha nwere site na njikọ aka na ndị agha mpaghara. Usoro a na-arụ ọrụ nke ọma, Gọvanọ Gọvanọ Frederick Lugard nwere ihe ịga nke ọma iji gbasaa ya na Southern Protectorate site na njikọta. N'ụzọ dị otú a, a gbanyere usoro ọchịchị na mba ọzọ na ndị ọchịchị na ndị Igbo  Ndị nwere ọgụgụ isi bidoro ịtụgharị uche maka ikike na nnwere onwe ka ukwuu.  Ogo nke klas ọgụgụ ọgụgụ a mụbara nke ukwuu na 1950s, yana mmụba dị ukwuu nke usoro agụmakwụkwọ mba.  N’agbata afọ 1940 na afọ 1950, ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị Igbo na Yoruba nọ n’agha maka mkpọsa nnwere onwe pụọ n’okpuru ọchịchị Britain. Ndị ndu ugwu, na-atụ ụjọ na nnwere onwe ga-apụta ịchịisi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba nke ndị ọkachasị ndị Westernized na South, họọrọ ịga n'ihu nke ọchịchị Britain. Dị ka ọnọdụ maka ịnakwere nnwere onwe, ha rịọrọ ka a nọgide na-ekewa mba ahụ na mpaghara atọ na North nwere ọnụ ọgụgụ doro anya. Ndi ndu ndi Igbo na ndi Yoruba, n’inwe obi uto inweta obodo nwere onwe ha n’agbanyeghi ihe obula, nabatara ihe ndi Northern choro.  [see okwu]
Agbanyeghị, mpaghara ndịda abụọ a nwere ọdịiche ọdịnala na nke echiche dị iche iche, na-ebute ọgbaghara n'etiti ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị abụọ nke Ndịda. Nke mbu, AG kwadoro ka ndi mmadu ghara inwe mmekorita nke mpaghara di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche dipuepute na Nigeria. Ọnọdụ Lagos bụ ihe jọgburu onwe ya maka AG nke na-achọghị Lagos, obodo ndị Yoruba nke nọ n'oge ahụ ka Federal Capital na oche nke ọchịchị mba wee bụrụ Isi Obodo nke Nigeria ma ọ bụrụ na ọ pụtara na ọ ga-efunahụ ọbụbụeze Yoruba. AG kwusiri ike na Lagos, obodo Yoruba dị na Western Nigeria ga-enwerịrị ka a mata ya kpamkpam dị ka obodo Yoruba na-enweghị mbibi ọ bụla, njikwa ma ọ bụ nnwere onwe nke ndị Yoruba. N'adịghị ka ọnọdụ a, ndị NCNC chọsiri ike ikwupụta Lagos, site na ya ịbụ "Federal Capital Territory" dị ka "ala onye ọ bụla" - nkwupụta nke enwere ike ịtụ anya iwe were AG nke nyere aka inye aka kwalite mmepe nke onye ọzọ ókèala dị na Naịjirịa dị ka "Federal Capital Territory" ma mesịa yie ikewapụ Naịjirịa ma ọ bụrụ na o nwetaghị ụzọ ya. Egwu nke seceobodo inwe kọntaktị na agụmakwụkwọ ọdịda anyanwụ, wee hiwe usoro agụmakwụkwọ bụ isi n'efu n'okpuru gọọmentị mpaghara Ọwụwa Anyanwụ tupu nnwere onwe.  
Ndabere nke Nigeria nke oge a hiwere na 1914, mgbe Britain jikọtara Northern na Southern protectorates. Malite na Northern Protectorate, ndị Britain tinyere usoro nke usoro iwu na-enweghị isi nke ha nwere site na njikọ aka na ndị agha mpaghara. Usoro a na-arụ ọrụ nke ọma, Gọvanọ Gọvanọ Frederick Lugard nwere ihe ịga nke ọma iji gbasaa ya na Southern Protectorate site na njikọta. N'ụzọ dị otú a, a gbanyere usoro ọchịchị na mba ọzọ na ndị ọchịchị na ndị Igbo  Ndị nwere ọgụgụ isi bidoro ịtụgharị uche maka ikike na nnwere onwe ka ukwuu.  Ogo nke klas ọgụgụ ọgụgụ a mụbara nke ukwuu na 1950s, yana mmụba dị ukwuu nke usoro agụmakwụkwọ mba.  N’agbata afọ 1940 na afọ 1950, ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị Igbo na Yoruba nọ n’agha maka mkpọsa nnwere onwe pụọ n’okpuru ọchịchị Britain. Ndị ndu ugwu, na-atụ ụjọ na nnwere onwe ga-apụta ịchịisi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba nke ndị ọkachasị ndị Westernized na South, họọrọ ịga n'ihu nke ọchịchị Britain. Dị ka ọnọdụ maka ịnakwere nnwere onwe, ha rịọrọ ka a nọgide na-ekewa mba ahụ na mpaghara atọ na North nwere ọnụ ọgụgụ doro anya. Ndi ndu ndi Igbo na ndi Yoruba, n’inwe obi uto inweta obodo nwere onwe ha n’agbanyeghi ihe obula, nabatara ihe ndi Northern choro.  [see okwu]iche dipuepute na Nigeria. Ọnọdụ Lagos bụ ihe jọgburu onwe ya maka AG nke na-achọghị Lagos, obodo ndị Yoruba nke nọ n'oge ahụ ka Federal Capital na oche nke ọchịchị mba wee bụrụ Isi Obodo nke Nigeria ma ọ bụrụ na ọ pụtara na ọ ga-efunahụ ọbụbụeze Yoruba. AG kwusiri ike na Lagos, obodo Yoruba dị na Western Nigeria ga-enwerịrị ka a mata ya kpamkpam dị ka obodo Yoruba na-enweghị mbibi ọ bụla, njikwa ma ọ bụ nnwere onwe nke ndị Yoruba. Edere ssion site na AG, debe ya ma dekọọ ya n'ọtụtụ nnọkọ iwu, gụnyere ogbako iwu nke emere na London na 1954 na-achọ ka ikike nkewa doo anya na iwu nke mba Naijiria na-apụta iji kwe ka akụkụ ọ bụla nke mba ahụ pụta. ịpụ na Naịjirịa, ọ bụrụ na mkpa adaa.  Nchoputa a maka itinye ikike nkewa site na mpaghara ndi nwere onwe ha site n’aka ndi AG ajuju ma guzogide NCNC bu ndi n’arita uka nke oma maka otu ndi otu jikotara aka ma jikoro onu ogugu n’ihi na o lere anya n’enye nke nkewa nkewa dika ihe na-emebi nbido nke otu Njikọ nke Nigeria. N'agbanyeghi mmegide sitere n'aka ndị nnọchi anya NCNC, nke ndị NPC mechara sonye ma na-eyi egwu iji lelee mmezi nke ntinye nke AG dịka aghụghọ nke ndị Britain, a manyere AG ịjụ ọnọdụ ya nke itinye ikike nkewapụ akụkụ nke iwu ala Naịjirịa. A sị na emere ụdị nkwado a na iwu ala Naịjirịa, a ga-ezere ihe ndị mechara mee nke butere agha obodo Naịjirịa na Biafra. Njikọ aka tupu nnwere onwe dị n’etiti NCNC na NPC megide ebumnuche nke AG ga-emesịa setịpụ ọnọdụ ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onwe nke ndị NCNC / NPC wee bute ọdachi n’afọ ndị ọzọ na Naịjirịa. 
Nsogbu Ugwu-Ndịda gosipụtara nke izizi na ọgbaghara Jos na 1945 nke ndị Igbo 300 nwụrụ  na ọzọ na 1 Mee 1953, dị ka ọgụ na Northern City nke Kano.  Ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ lekwasịrị anya na-ewulite ike na mpaghara nke ha, na-ebute ọgbaghara na adịghị n'otu na gọọmentị etiti. 
N’afọ 1946, ndị Britain kewara Ndịda Mpaghara na mpaghara ọdịda anyanwụ na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ. Gọọmentị ọ bụla nwere ikike ịnakọta ụgwọ sitere na akụ sitere na mpaghara ya. Nke a gbanwere na 1956 mgbe Shell-BP hụrụ nnukwu mmanụ mmanụ na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ. Otu kọmịshọn nke Jeremy Raisman na Ronald Tress duziri kpebiri na ikike iji nweta ego ga-abanye ugbu a na "Akaụntụ Pools Distributable" na ego kewara n'etiti akụkụ dị iche iche nke gọọmentị (50% gaa mpaghara sitere, 20% gaa gọọmentị etiti, 30% gaa mpaghara ndị ọzọ  Iji hụ na mmetụta na-aga n'ihu, gọọmentị Britain kwalitere ịdị n'otu na mpaghara Northern na echiche seccesionist n'etiti na n'ime mpaghara abụọ ndịda. Gọọmentị Naijiria, mgbe nnwere onwe gasịrị, kwalitere esemokwu na West na imepụta mpaghara Ọwụwa Anyanwụ ọhụrụ ọhụrụ na mpaghara nwere mmanụ.  Iwu ohuru nke 1946 kwuputakwara na "Ihe niile dị na njikwa mmanụ mmanụ niile, n'ime, n'okpuru, ma ọ bụ n'elu ala ọ bụla, na Naịjirịa, na osimiri, iyi, na iyi mmiri niile na Naịjirịa, bụ ma a ga-etinye ya. , Okpueze ahụ. " Britain ritere uru dị ukwuu site na ịrị elu okpukpu ise na mbupụ nke Naịjirịa n'etiti ọgba aghara akụ na ụba mgbe agha bisịrị. 
Nnwere Onwe na Mbụ Republic Naịjirịa nwere nnwere onwe na 1 Ọktoba 1960. A malitere Republic nke mbụ na 1 Ọktoba 1963. Onye isi ala mbụ nke Nigeria, Abubakar Tafawa Balewa, bụ onye ugwu na onye nchoputa nke Northern People's Congress. Ya na ndị National Council of Nigeria na ndị otu Cameroons jikọrọ aka, yana onye ndu otu onye ama ama ama bụ Nnamdị "Zik" Azikiwe, onye ghọrọ Gọvanọ General na mgbe ahụ onye isi ala. Otu akpọrọ akpọrọ Action Group nke ndị Yoruba jikọrọ aka wee rụọ ọrụ mmegide. 
Ndị ọrụ na-ewute nke ukwuu site na ụgwọ dị ala na ọnọdụ dị njọ, ọkachasị mgbe ha jiri ọnọdụ ha tụnyere ụdị ndụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na Lagos. Ọtụtụ ndị na-akwụ ụgwọ bi na mpaghara Lagos, ọtụtụ biri na ụlọ dị ize ndụ karịrị akarị. Ọrụ ndị ọrụ gụnyere gụnyere ọgbaghara siri ike na 1963, na-ejedebe na abụbụ ọrụ izugbe na June 1964. Ndị na-eti ihe nupụrụ isi na iwu ịlaghachi ọrụ ma n'otu oge ndị uwe ojii ọgba aghara chụsasịrị. N'ikpeazụ, ha nwetara mmeri ụgwọ. Abụbụ ọrụ ahụ gụnyere ndị agbụrụ niile.  Brigadier General H. M. Njoku lara ezumike nká mechara dee na ọchịagha izugbe mere ka esemokwu dị n'etiti ndị agha na ndị nkịtị nkịtị, ma na-etinye nrụgide na ndị agha ime ihe megide gọọmentị nke ọtụtụ ndị chere na ọ rụrụ arụ. 
Ntuli aka nke 1964, nke metụtara mkpọsa siri ike n'afọ niile, butere nkewa agbụrụ na mpaghara. Iwe nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị gbagoro ma ọtụtụ ndị mgbasa ozi na-atụ egwu maka nchekwa ha mgbe ha na-agagharị na mba ahụ. Ndị agha ahụ nyefere ugboro ugboro na Tiv Division, na-egbu ọtụtụ narị mmadụ ma na-ejide ọtụtụ puku ndị Tiv na-agbasi mbọ ike maka mkpebi onwe ha.  
Akụkọ a gbasaara banyere wayo mebiri izi ezi nke ntuli aka ahụ.  Ndị ọdịda anyanwụ kacha ewe iwe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Northern People's Congress, ọtụtụ n'ime ndị mmeri ha na-agbanyeghị aka na ntuli aka ahụ. Ime ihe ike gbasaa na mba ahụ niile wee malite ịgbaga North na West, ụfọdụ gbagara Dahomey. Ngosipụta nke pusoro olitical site na North, na ọgba aghara na-agbasa na mba ahụ dum, kpaliri ndị agha n'ime ndị agha ịtụle ihe dị mkpa.
Na mgbakwunye na Shell-BP, ndị Britain nwetara uru site na ntinye na azụmahịa. Companylọ ọrụ United Africa nke Britain nwe naanị na-achịkwa azụmahịa 41.3% nke mba ofesi na Nigeria.  Na agba 516,000 kwa ụbọchị, Naịjirịa abụrụla mba nke iri kachasị na-ebupụ mmanụ na mba ụwa.
Agbanyeghị na ndị agha Nigeria lụrụ ọgụ maka Britain na Agha Firstwa nke Abụọ na nke Abụọ, ndị agha Nigeria ketara na nnwere onwe na 1960 bụ ndị nchekwa nchekwa n'ime obodo ahaziri ma zụọ iji nyere ndị uwe ojii aka n'ịgbado ihe ịma aka nye ikike karịa ịlụ agha.  Ọkọ akụkọ ihe mere eme nke India bụ Pradeep Barua kpọrọ ndị agha Nigeria na 1960 "ndị uwe ojii dị ebube", ọbụnadị mgbe nnwere onwe gasịrị, ndị agha Naịjirịa jigidere ọrụ ha mere n'okpuru ndị Britain na 1950s.  Ndị agha Naịjirịa emeghị ọzụzụ n'ọhịa, ọkachasịkwa na ha enweghị nnukwu ngwa ọgụ. Tupu 1948, ekweghị ka ndị Naịjirịa nye ọrụ kọmịshọn, naanị na 1948 ka ụfọdụ ndị ekwe nkwa na ha ga-aga Sandhurst maka ọzụzụ onye isi ebe n'otu oge ahụ ka enyere ndị NCO ikike ịkwalite ịbụ ndị isi ma ọ bụrụ na ha mechara N'ezie na ọzụzụ ndị isi na Mons Hall ma ọ bụ Eaton Hall na England.  N'agbanyeghị mgbanwe ndị ahụ, ọ bụ naanị nkezi nke ndị Nigeria 2 kwa afọ ka enyere ọrụ ndị isi n'etiti 1948-55 na naanị 7 kwa afọ site na 1955-1960.  N'oge nnwere onwe na 1960, n'ime ndị isi 257 na-achịkwa ndị agha Nigeria nke ghọrọ ndị agha Nigeria, naanị 57 bụ ndị Nigeria. 
N'iji usoro "agha agha" nke mbu meputara n'okpuru Raj na 19th century India, ndi ochichi colonial kpebiri na ndi mmadu si n'ebe ugwu Nigeria dika Hausa, Kiv, na Kanuri bu ndi "ndi agha siri ike" ndi gbara ha ume na ndi mmadu. site na ndịda Naịjirịa dịka ndị Igbo na ndị Yoruba bụ ndị elere anya dị ka ndị dị nro nke na ha agaghị enwe ezigbo ndị agha, ya mere, ha enweghị nkụda mmụọ. Site na 1958, ụmụ nwoke si n'ebe ugwu Naịjirịa mejuputara 62% nke Nigeria Regiment ebe ụmụ nwoke si ndịda na ọdịda anyanwụ mejupụtara naanị 36%.  Na 1958, agbanwee iwu a, wee gawa ugbu a ụmụ nwoke si mpaghara ugwu mejupụta naanị 50% nke ndị agha ebe ụmụ nwoke si ndịda ndịda ọwụwa anyanwụ na ndịda ọdịda anyanwụ bụ onye ọ bụla mejupụtara 25%, amụma agbadoro mgbe nnwere onwe gasịrị.  Ndị ugwu ugwu a masịrị mbụ ha bụ ndị ndị ọrụ ha gwara ha na ha bụ "agbụrụ ndị agha" siri ike ma sie ike "were iwe ọkụ na mgbanwe atumatu ntinye n'ọrụ, karịa ka mgbe nnwere onwe na 1960 enwere ohere maka ụmụ nwoke Nigeria iji jee ozi dị ka ndị isi ọrụ na-adịbeghị tupu nnwere onwe.  Ebe ụmụ nwoke si ndịda ọwụwa anyanwụ na ndịda ọdịda anyanwụ kachasị gụrụ akwụkwọ karịa ụmụ nwoke si n'ebe ugwu, o yikarịrị ka a ga-akwalite ha na ndị isi na ndị agha ọhụrụ nke Nigeria, nke kpasuru ndị isi ugwu iwe.  N'otu oge ahụ, dịka akụkụ nke amụma nke Nigerianisation, ọ bụ amụma gọọmentị iziga ndị ọrụ Britain ndị ejidere ka ha nwechara nnwere onwe, site na ịkwalite ọtụtụ ndị Naịjirịa ruo mgbe enwere ike rue mgbe 1966 enweghị ndị ọrụ Britain ọzọ.  Dịka akụkụ nke iwu nke Nigerianisation, a wedara ụkpụrụ agụmakwụkwọ maka ndị isi ọfụma na naanị diplọma ụlọ akwụkwọ sekọndrị dị mkpa maka ọrụ ndị ọrụ mgbe n'otu oge ahụ na nchịkwa nke Nigeria mere ka ndị isi ndị ntorobịa na-eto eto juputara, juputara na ndị nwere oke ọchịchọ na-enweghị mmasị na ndị gụsịrị akwụkwọ na Sandhurst. arụ ọrụ na iwu dị elu dị ka igbochi ohere ndị ọzọ maka nkwalite.  Otu ndị ọrụ ndị Igbo bidoro ịkpa nkata ịkwatu ọchịchị rụrụ arụ, na-ahụ praịm minista ugwu, Sir Abubakar Tafawa Balewa, ka ọ na-ebukọrọ akụ nke ndịda ndịda ọwụwa anyanwụ.
Nchịkwa ndị agha Na 15 Jenụwarị 1966, Major Chukuma Kaduna Nzeogwu na onye isi Emmanuel Ifeajuna na ndị isi ndị ọchịagha ndị ọzọ (ọkachasị ndị isi na ndị isi) gbara mbọ ịgba ọchịchị mgba okpuru. Ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị abụọ nke ugwu, Prime Minister, Sir Abubakar Tafawa Balewa na Onye isi ala nke ugwu, Sir Ahmadu Bello bụ onye Major Nzeogwu gburu. Egburu onye ọzọ bụ nwunye Sir Ahmadu Bello na ndị isi nke Northern extraction. Onye isi ala, Sir Nnamdi Azikiwe, onye Igbo, nọ na ezumike ezumike dị ogologo na West Indies. Ọ laghachighị rue ụbọchị ole na-achị ọchịchị ahụ. A na-enyo enyo na ndị na-achọ izu ike ndị Igbo tikpọrọ ya na ndị ndu ndị ọzọ bụ ndị Igbo ihe gbasara ọchịchị na-abịa. Na mgbakwunye na ogbugbu ndị ndu ndọrọndọrọ ọchịchị ugwu, Onye isi ala nke mpaghara ọdịda anyanwụ, Ladoke Akintola na ndị isi ndị agha ndị Yoruba bụkwa ndị e gburu. Nkọwa ahụ, nke a na-akpọkwa "Nchịkwa nke Ndị Isi Ise", akọwapụtara n'akụkụ ụfọdụ dị ka naanị mgbanwe mgbanwe nke Naijiria.  Nke a bụ mbido mbụ na mkpụmkpụ ndụ nascen Nigeria. t nke ọchịchị onye kwuo uche ya nke abụọ. Ebubo nke ntuli aka nke ntuli aka bụ otu n'ime ihe kpatara ndị nkata ọchịchị ahụ. Ewezuga igbu ọtụtụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na Naịjirịa, "Majors 'Coup" ahụpụtakwara ọtụtụ ndị isi nke ndị agha Nigeria Federal gburu ndị ọrụ 7 ji ọkwa dị elu karịa onye isi ndị agha egbu.  N'ime ndị isi asaa ahụ e gburu, mmadụ anọ bụ ndị ugwu, mmadụ abụọ si n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ, 1 si n'etiti etiti ọdịda anyanwụ na 1 bụrụ onye Igbo.
A hụghị ntuli aka a dị ka ọgbaghara mgbanwe nke akụkụ ndị ọzọ nke ndị Naijiria, ọkachasị na mpaghara Northern na Western na ndị na-emezigharị oge na-adịghị anya. Allegedfọdụ boro ebubo, ọkachasị ndị sitere na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ nke Naịjirịa, na ndị isi ahụ chọrọ isi onye isi otu Action Group, Obafemi Awolowo pụọ n'ụlọ nga wee mee ya onye isi gọọmentị ọhụrụ ahụ. Ebumnuche ha bụ imebisị ikike ọchịchị ndị ugwu dị na ugwu mana mbọ ha weghara ọchịchị dara nke ọma. Johnson Aguiyi-Ironsi, onye Igbo bụkwa onye isi ndị agha nke ndị agha Naịjirịa, gbochiri ọrụ ndị ọchịchị na-eme na South ma bụrụ onye isi nke steeti na 16 Jenụwarị mgbe ndị isi ahụ nyefere onwe ha. 
Na njedebe, ndị isi anọghị n'ọnọdụ ịmalite ihe mgbaru ọsọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị a. Mgbe ọgbaghara 15th nke Jenụwarị ha meriri ijide ọchịchị na ugwu, ọ dara na ndịda, ọkachasị na mpaghara ndị agha Lagos-Ibadan-Abeokuta ebe ndị agha na-eguzosi ike n'ihe nke ndị ọchịagha Johnson Aguyi-Ironsi duuru wee nwee ihe ịga nke ọma n'iwepu nnupụisi ahụ. Ewezuga Ifeajuna ndị gbapụrụ mba ahụ mgbe ọdịda nke mwakpo ha kwụsịrị, ndị isi nke abụọ nke ọzọ bụ Majors, na ndị isi ndị agha ndị ọzọ metụtara nnupụisi ahụ, mechara nyefee High Command na-eguzosi ike n'ihe ma bụrụ ndị ejidere ha dịka nyocha gọọmentị etiti nke ihe omume ahụ malitere.  
Aguyi-Ironsi kwụsịtụrụ iwu ma mebe ụlọomeiwu. Mgbe ahụ, ọ kwụsịrị ụdị ọchịchị gọọmentị mpaghara ma na-agbaso otu dịka atumatu ndị NCNC masịrị, na-egosi na ụfọdụ ihe ọmụma ndọrọ ndọrọ ọchịchị NCNC metụtara ya. Otú ọ dị, ọ họpụtara Colonel Hassan Katsina, nwa nwoke nwoke nke Katsina bụ Usman Nagogo, ka ọ bụrụ onye ọchịchị nke Mpaghara Ugwu, na-egosi ụfọdụ njikere ịnọgide na-enwe mmekọrịta na òtù a.  O nyekwara iwu ka ahapụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ugwu site n'ụlọ mkpọrọ (na-enyere ha aka ịhazi nkwatu ọchịchị ya na-abịanụ). Aguyi-Ironsi jụrụ nkwado nke enyemaka ndị Britain mana o kwere nkwa ichebe ọdịmma ndị Britain. 
Ironsi anwụghị ewetara ndị aghụghọ ahụ dara ada ikpe dịka iwu ndị agha chọrọ n'oge ahụ yana dịka ọtụtụ ndị isi ugwu na ndị ọdịda anyanwụ dụrụ ọdụ, kama nke ahụ, a nọgidere na-eche ndị na-akpa nkata ọchịchị na ndị agha na-akwụ ụgwọ zuru oke yana etinyere ụfọdụ ọbụna ka ọ na-eche ikpe. Nchịkwa a, n'agbanyeghị ọdịda ya, ka a na-ahụkarị dịka ọ na-abara ndị Igbo uru ebe ọ bụ na ndị nkata ahụ enwetaghị mmetụta ọ bụla maka omume ha na enweghị ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị Igbo metụtara. Ọ bụ ezie na ndị gburu ogbugbu ahụ bụkarịrị ndị ugwu, ọtụtụ ndị amaara ama bụ ndị Igbo na ndị ọchịagha na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị nke ọdịda anyanwụ na mpaghara ugwu akagburu n'ụzọ dị ukwuu ebe ndị ọchịagha na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị enweghị isi. Agbanyeghị Ironsi, onye bụ onye Igbo, echere na ọ gbalịrị ọtụtụ oge ime ihe na-atọ ndị nwe ugwu ụtọ. Ihe omume ọzọ nke mekwara ka ihe akpọrọ "nkata ndị Igbo" bụ igbu ndị ndu ndị ugwu, na ogbugbu gburu nwunye nwunye Brigeder Ademulegun dị ime site n'aka ndị chọrọ igbu ọchịchị. 
N’agbanyeghi otutu ihe megidere nnupu isi nke ndi agha ugwu (dika John Atom Kpera, onye chiburu ndi agha nke Benue State), ogbugbu ndi agha agha nke Lieutenant-Colonel Arthur Unegbe site n’aka ndi nwuru n’agha, na Ironsi kwusi ndi igbo. ịgba ọchịchị mgba okpuru, ịdị mfe nke Ironsi ji kwụsị nnupu isi ahụ butere enyo na ndị Igbo na-akpa nkata kpara nkata n’oge niile iji mepe ụzọ ka Ironsi weghachite ọchịchị Naịjirịa.
Colonel Odumegwu Ojukwu ghọrọ gọvanọ ndị agha nke Eastern Region n’oge a.   Na 24 Mee 1966, gọọmentị ndị agha wepụtara Iwu Mwepu Unification # 34, nke ga-anọchi gọọmentị na usoro etiti etiti. Ndi ugwu Northern ahutara na amaghi iwu a. 
Na nkpasu iwe sitere na mgbasa ozi nke Ọwụwa Anyanwụ nke gosipụtara ugboro ugboro ihe nlelị na katuun nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbago ugwu ahụ, n'abalị nke 29 Julaị 1966, ndị agha mgbago ugwu na ogige Abeokuta gbaruru, si otú a na-adọta mgbochi-agha, nke dịbu na nhazi usoro. Ironsi gara nleta n’Ibadan mgbe ha na-ada ọchịchị mmụọ ma nọrọ ebe ahụ gbuo ya (ya na onye ọbịa ya, Adekunle Fajuyi). Ntughari a mere ka echichi nke Lieutenant-Colonel Yakubu Gowon dị ka onye isi ndị agha nke ndị agha Nigeria. A họọrọ Gowon dị ka onye ga-emebi okwukwe ya. Ọ bụ onye ugwu, onye Kristian, si n’ebo pere mpe, ma nwee aha ọma n’etiti ndị agha. 
Ọ dịka ọ dị ka Gowon chere ihu ọ bụghị naanị na nsogbu nwere ike ibuso ndị Ọwụwa Anyanwụ agha, mana nsogbu nkewa na nke ae Northern na Western mpaghara.  Ndị na-emegide ọchịchị atụmatụ tụlere iji ohere wepu onwe ha na gọọmentị n'onwe ha. Agbanyeghị, ndị nnọchi anya Britain na United States gbara Gowon ume ka ọ na-achịkwa mba ahụ dum. Gowon gbasoro atụmatụ a, na-akagbu Iwu Mwepu, na-ekwupụta ịlaghachi na usoro gọọmentị etiti. 
Mkpagbu nke ndi Igbo Site na June rue October 1966, ndi pogroms no na North gburu ihe dika ndi 8,000 rue 30,000 ndi Igbo, okara n’ime ha bu umu aka, ma mee ka ihe kariri nde rue nde abuo gbapu oso mpaghara Eastern.  Ewere 29 Septemba 1966, ụbọchị ụbọchị kachasị njọ; n'ihi mgbuchapụ, akpọrọ ya 'Black Thursday'.  
Ọkammụta n'ihe banyere mmekọrịta mmadụ na chi, Charles Keil, onye bịara ileta Naịjirịa n'afọ 1966, kwuru, sị:
Ndi pogroms nke m huru na Makurdi, Nigeria (mbubreyo Septemba 1966) bu ihe ngosi nke otutu mkparita uka nke Ibo na ndi Eastern East na mkparita uka nke Tiv, Idoma, Hausa na ndi Northerners ndi ozo bi na Makurdi, ma, ha kwesiri ka emegharia ya n'obodo. obodo, ndị ọchịagha na-edu ndị agha Nigeria. Tupu mgbe a na-egbu ya, na mgbe a gbusịrị ya, enwere ike ịnụ Col. Gowon na redio na-enye ndị nchekwa ọwụwa anyanwụ, 'ụmụ amaala niile nke Nigeria' nchekwa nke nchekwa, mana ebumnuche nke ndị agha, naanị ike dị na Naịjirịa ugbu a ma ọ bụ mgbe ahụ, doro anya na ihe mgbu. Ka m gụchara ozu ndị ahụ etinyere n’akụkụ okporo ụzọ Makurdi, ndị agha kpọghachiri m n’obodo ahụ ma rịọ mgbaghara maka ajọ ísì ahụ ma jiri nkwanye ugwu kọwaa na ha na-emere m na ụwa nnukwu ihu ọma site na iwepu ndị Igbo. 
Gọọmentị ndị agha gọọmentị etiti tọkwara ntọala maka mgbochi akụ na ụba nke Ọwụwa Anyanwụ fullwa nke malitere ịrụ ọrụ zuru oke na 1967. 
Kewapụta Ide mmiri gbara ndị gbara ọsọ ndụ na Ọwụwa Anyanwụ Nigeria mere ka ihe sie ike. Mkparịta ụka sara mbara mere n'etiti Ojukwu, nke na-anọchite Ọwụwa Anyanwụ Nigeria, na Gowon, na-anọchite anya gọọmentị ndị agha Federal Nigeria. Na nkwekọrịta Aburi, nke mechara bịanye aka na Aburi, Ghana, ndị otu ahụ kwekọrịtara na a ga-etinye gọọmentị Naịjirịa atọtọ. Gowon gbupụrụ oge nkwekọrịta nke nkwekọrịta ahụ ma mechaa gbanwee. File:Nigeria states-1967-1976.png Biafra iwe Ndị Bịafra zaghachiri n'iwe nke ha mgbe, na 9 Ọgọstụ, ndị agha Biafran kwagara na westside n'ime Mid-Western nke mpaghara Naịjirịa nke gafere osimiri Niger, gafere Benin City, rue mgbe a kwụsịrị ha n'Ore na Ondo Steeti gafere ókè ala ahụ na 21 August, 210 kilomita (130 mi) ọwụwa anyanwụ nke isi obodo Nigeria nke Lagos. Onye lụrụ ọgụ Biafra bụ Lt. Col. Banjo, onye Yoruba, nwere ọkwa Biafra dị ka onye nkwuchite. Mwakpo ahụ ezuteghị ọgụ na Mid-West n'ụzọ dị mfe weghaara ya.
Flag nke Republic of Benin Nke a bụ n'ihi nhazi tupu ekewapụta na ndị agha niile kwesiri ịlaghachi na mpaghara ha iji kwụsị ogbugbu a na-egbu mmadụ, bụ nke ndị agha Igbo bụ ndị e merụrụ arụ na ya. Ndị agha Naịjirịa ndị kwesiri ịchekwa steeti Mid-West bụkarịrị Mid-West Igbo ma, ebe ụfọdụ na ndị ogbo ha nọ n'ọwụwa anyanwụ na-akpakọrịta, ndị ọzọ jụrụ. General Gowon zara site na ịrịọ Colonel Murtala Mohammed (onye mechara bụrụ onye isi ala na 1975) i hiwe ngalaba ọzọ (2nd Infantry Division) iji chụpụ ndị Biafra site na Mid-West, yana ịgbachitere akụkụ ọdịda anyanwụ ma wakpo Biafra site na Ọdịda Anyanwụ nakwa.  N'otu oge ahụ, Gowon kwupụtara "agha zuru oke" wee maa ọkwa na gọọmentị etiti ga-akpọkọta ndị niile bi na Naịjirịa maka ọgụ a.  Site na oge ọkọchị nke 1967 ruo oge opupu ihe ubi nke 1969, ndị agha Federal sitere na ike nke 7,000 ruo n'ike nke ndị 200,000 ahaziri na nkewa atọ.  Biafra bido na ndi agha abuo site na Enugu bido agha ahu, nke ruru batalion abuo site n’onwa August 1967, nke gbasaa n’oge na adighi anya na ndi brigade abuo, nke 51 na nke 52 nke buru isi ndi Biafra.  Ka ọ na-erule 1969, ndị Biafra ga-ewepụta puku iri itoolu (90,000) nke aghọrọ ụzọ 5 nkewa, yana ndị otu nọọrọ onwe ha.
Ka ndị agha Naịjirịa weghachitere Mid-West, onye isi agha Biafran kwupụtara Republic of Benin na ụbọchị 19 nke ọnwa Septemba, n'agbanyeghị na ọ kwụsịrị ịdị n'echi ya. (Obodo Benin nke dị ugbu a, n'ebe ọdịda anyanwụ nke Nigeria, ka a na-akpọ Dahomey n'oge ahụ.)  [achọrọ]
Agbanyeghị na ndị Naijirịa weghachitere Benin City na 22 Septemba, ndị Biafra nwere ihe ịga nke ọma na ebumnuche ha bụ isi site na igbado ndị agha Federal dị ka ha nwere ike. Gen. Gowon malitekwara mwakpo Biafra n'ebe ndịda site na Niger Delta ruo mpaghara osimiri, na-eji ọtụtụ ndị iwu Lagos Garrison n'okpuru Colonel Benjamin Adekunle (akpọ Black Scorpion) iji mepụta 3rd Infantry Division (nke e mechara kpọọ dị ka 3 Marine Commando). Ka agha ahụ gara n’ihu, ndị agha Naịjirịa weghachitere n’etiti mpaghara ndị sara mbara, gụnyere Yoruba, Itshekiri, Urhobo, Edo, Ijaw, wdg.
Naijiria iwe E kere iwu ahụ ka ọ bụrụ brigades abụọ na ndị agha atọ ọ bụla. Ndi otu ndi agha no na uzo uzo Ogugu - Ogunga - Nsukka ma ndi Brigade abuo gara n’iru Gakem - Obudu - Ogoja. Ka ọ na-erule 10 July 1967, ọ meriri ókèala ya niile. Ka ọ na-erule abalị iri na abụọ nke ọnwa Julaị, ndị agha abụọ jidere Gakem, Ogudu na Ogoja. Iji nyere Naịjirịa aka, Egypt zigara mmadụ isii bọmbụ Ilyushin Il-28 bụ ndị ndị ọrụ ụgbọelu nke Egypt butere.  Omume ndị Ijipt na-agba ito ogbunigwe n'ụlọ ọgwụ Red Cross yana ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ na n'ọma ahịa mere ka mba Biafra nwee ọmịiko. 
Lynn Garrison na ọdụ ụgbọ mmiri nke F4U-7 Corsair 1966 Enugwu ghọrọ ebe mgbada na nnupu isi, gọọmentị Naịjirịa kwenyere na ọ bụrụ na anwude Enugwu, ịchụpụ ga-akwụsị. Atụmatụ ibuso Enugwu malitere na 12 Septemba 1967, ka ọ na-erule ụbọchị anọ nke ọnwa Ọktoba 1967 ndị agha Naịjirịa weghaara Enugwu.  Ndị agha Naịjirịa n'okpuru Murtala Mohammed gburu ọtụtụ mmadụ narị asaa mgbe ha jidere Asaba na Osimiri Niger. Akpọrọ ndị Naịjirịa ugboro atọ ka ha na-achọ ịgafe Osimiri Niger n'oge Ọktọba, na-akpata ọnwụ nke ọtụtụ puku ndị agha, ọtụtụ tankị na akụrụngwa. Ngbali nke mbu nke ndi agha ndi agha nke abuo n’abali iri na abuo n’onwa iri n’otu n’onwa iri na abuo ka hafe Niger site n’obodo Asaba rue obodo Biafran nke Onitsha riri ndi agha ndi agha nke Naijiria ihe kariri ndi agha 5,000 ndi egburu, ndi meruru aru, ndi ejidere ma obu ndi na efu efu. Operation Tiger Claw (17–20 Ọktoba 1967) bụ ọgbaghara ndịagha mere n’etiti ndị agha Naịjirịa na ndị Biafra. Na abali iri na asaa nke onwa iri n’ato aho 1967 ndi Nigeria batara na Calabar nke ndi “Black Scorpion” bu Benjamin Adekunle du, ebe ndi Biafra bu Col. Ogbu Ogi bu onye n’achi ochichi na mpaghara Kalaba na Opobo na Lynn Garrison, ndi agha ndi mba ozo. Ndi Biafra batara ozugbo oku site na mmiri na ikuku. N’ụbọchị abụọ sochirinụ ka ndị agha ụgbọ elu Naịjirịa na-atụ ogbunigwe Biafra na ngwa agha. N'otu ụbọchị ahụ, Lynn Garrison ruru Calabar mana ndị agha gọọmentị gbara egbe ozugbo. Ka ọ na-erule ụbọchị 20 nke Ọktoba, ndị agha Garrison hapụrụ agha ahụ ebe Col. Ogi nyefere Gen. Adekunle eze. Na 19 Mee 1968 Portharcourt weghaara. Na njide nke EnugwuBiafra iwe Ndị Bịafra zaghachiri n'iwe nke ha mgbe, na 9 Ọgọstụ, ndị agha Biafran kwagara na westside n'ime Mid-Western nke mpaghara Naịjirịa nke gafere osimiri Niger, gafere Benin City, rue mgbe a kwụsịrị ha n'Ore na Ondo Steeti gafere ókè ala ahụ na 21 August, 210 kilomita (130 mi) ọwụwa anyanwụ nke isi obodo Nigeria nke Lagos. Onye lụrụ ọgụ Biafra bụ Lt. Col. Banjo, onye Yoruba, nwere ọkwa Biafra dị ka onye nkwuchite. Mwakpo ahụ ezuteghị ọgụ na Mid-West n'ụzọ dị mfe weghaara ya.
Lynn Garrison na ọdụ ụgbọ mmiri nke F4U-7 Corsair 1966 Enugwu ghọrọ ebe mgbada na nnupu isi, gọọmentị Naịjirịa kwenyere na ọ bụrụ na anwude Enugwu, ịchụpụ ga-akwụsị. Atụmatụ ibuso Enugwu malitere na 12 Septemba 1967, ka ọ na-erule ụbọchị anọ nke ọnwa Ọktoba 1967 ndị agha Naịjirịa weghaara Enugwu.  Ndị agha Naịjirịa n'okpuru Murtala Mohammed gburu ọtụtụ mmadụ narị asaa mgbe ha jidere Asaba na Osimiri Niger. Akpọrọ ndị Naịjirịa ugboro atọ ka ha na-achọ ịgafe Osimiri Niger n'oge Ọktọba, na-akpata ọnwụ nke ọtụtụ puku ndị agha, ọtụtụ tankị na akụrụngwa. Ngbali nke mbu nke ndi agha ndi agha nke abuo n’abali iri na abuo n’onwa iri n’otu n’onwa iri na abuo ka hafe Niger site n’obodo Asaba rue obodo Biafran nke Onitsha riri ndi agha ndi agha nke Naijiria ihe kariri ndi agha 5,000 ndi egburu, ndi meruru aru, ndi ejidere ma obu ndi na efu efu. Operation Tiger Claw (17–20 Ọktoba 1967) bụ ọgbaghara ndịagha mere n’etiti ndị agha Naịjirịa na ndị Biafra. Na abali iri na asaa nke onwa iri n’ato aho 1967 ndi Nigeria batara na Calabar nke ndi “Black Scorpion” bu Benjamin Adekunle du, ebe ndi Biafra bu Col. Ogbu Ogi bu onye n’achi ochichi na mpaghara Kalaba na Opobo na Lynn Garrison, ndi agha ndi mba ozo. Ndi Biafra batara ozugbo oku site na mmiri na ikuku. N’ụbọchị abụọ sochirinụ ka ndị agha ụgbọ elu Naịjirịa na-atụ ogbunigwe Biafra na ngwa agha. N'otu ụbọchị ahụ, Lynn Garrison ruru Calabar mana ndị agha gọọmentị gbara egbe ozugbo. Ka ọ na-erule ụbọchị 20 nke Ọktoba, ndị agha Garrison hapụrụ agha ahụ ebe Col. Ogi nyefere Gen. Adekunle eze. Na 19 Mee 1968 Portharcourt weghaara. Na njide nke Enugwu, Bonny, Calabar na Portharcourt, mba ndị dị n'èzí enwereghị obi abụọ gbasara ọchịchị gọọmentị etiti na agha ahụ. 
Mgbasa ozi Biafran na-ata ụta mgbe nile maka mmeri nke ndị agha na "ndị ọgbaghara" n'ime ọkwa onye ọrụ Biafran, ma a gbara ndị isi abụọ na ndị ọzọ ume ịkatọ ndị a na-enyo enyo na "ndị saboteurs".  N'ime agha nile a, o yikarịrị ka ndị agha Biafran n'akụkụ ha ga-egbu ha karịa ndị agha Federal ka Ojukwu mere nsacha ma nwee ndị isi ndị ebubo na ha bụ "ndị omekome" ewepụtara ma gbagbue ha.  Ojukwu atụkwasịghị obi na imirikiti ndị ọrụ gọọmentị etiti Igbo bụbu ndị jikọtara Biafra wee hụ ha dị ka ndị ha na ha ga-azọ, na-ebute ọgbaghara igbu ọchụ nke mere ka egbuo ọtụtụ n'ime ha.  Ozokwa, Ojukwu choro oke ogwu maka mmeri Biafra na onwu bu ntaramahuhu diri ndi isi Biafra ndi agha ha meriri.  N'ihi ụjọ ịtụ mgba okpuru, Ojukwu mepụtara ọtụtụ ngalaba dịka S Brigade nke ya onwe ya nyere iwu na nke Brigade nke anọ nke ndị ọchịagha ndị German bụ Rolf Steiner nyere iwu nke na-abụghị usoro iwu mgbe niile.  Barua dere na onye ndu Ojukwu, ọkachasị ogbugbu ọ na-egbu ndị ọfịsa ya nwere “oke ọdachi” na mmụọ ndị agha Biafran.  Ogbugbu ndị isi ahụ mekwara ka o siere ndị ọrụ Biafran ike inweta ahụmịhe dị mkpa iji duzie ọrụ ndị agha nke ọma dịka Barua kwuru na ndị agha Biafran enweghị ma “ịga n’ihu na ịdị n’otu” ha ga-amụta site n’agha ahụ. 
Na-achịkwa mmepụta mmanụ
Njikwa mmanụ ala na Niger Delta bụ ebumnobi ndị agha kachasị mkpa n'oge agha ahụ. Lllọ ọrụ Shell-BP Petroleum Development Company malitere Shel-BP Petroleum Development Company na 1937. Achọpụtara mmanụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ, gọọmentị etiti tinyere mmachi ụgbọ mmiri na mpaghara ahụ. Mmachibido iwu a etinyeghị ụgbọ mmiri mmanụ. Ndị ndu Biafra degara Shell-BP akwụkwọ ka ha chọọ ụgwọ maka mmanụ a na-achọgharị na mpaghara ha. Emechaa nyochachara, Shell-BP kpebiri ịkwụ Biafra ego ruru 250,000 pound. Akụkọ banyere ịkwụ ụgwọ a ruru gọọmentị etiti, nke mere ka mbupụ ụgbọ mmiri ozugbo nye ndị na-ebu mmanụ. Gọọmentị Naịjirịa mekwara ka Shell-BP doo anya na ha tụrụ anya na ụlọ ọrụ a ga-akwụ ụgwọ ụgwọ mmanụ niile pụtara ìhè ozugbo. Site na nkwụsị na ugwo maka gọọmentị Biafra rịọ Shell-BP ka ọ kwụsị ọrụ na Biafra ma weghara ụlọ ọrụ ahụ. 
Ka ọ na-erule na njedebe nke ọnwa Julaị 1967, ndị agha etiti na ndị ụgbọ mmiri Naịjirịa weghaara Bonny Island na Niger Delta, wee si otú a na-achịkwa ụlọ ọrụ Shell-BP dị mkpa.  Ọrụ malitere ọzọ na Mee 1968, mgbe Nigeria weghaara Port Harcourt. Facilitieslọ ọrụ ya emebiwo ma chọọ nrụzi.  Mepụta mmanụ na mbupụ na-aga n'ihu, mana na ọkwa dị ala. Emecha ngwụcha nke 1969 nke ọdụ ọhụrụ na Forçados wetara mmepụta site na 142,000 gbọmgbọm / ụbọchị na 1958 ruo gbọga 540,000 / ụbọchị na 1969. Na 1970, ọnụ ọgụgụ a rịrị elu na 1,080,000 agba / ụbọchị. Ihe ndị eze nyere mere ka Nigeria nwee ike ịzụta ngwa agha ndị ọzọ, were ego ndị ọrụ agha, wdg. Biafra enweghị ike ịsọ mpi na ọkwa akụ na ụba a.
Arụ ụka maka agbụrụ pere mpe na Biafra Ndi pere mpe na Biafra tara oke arụ n’aka ndị na-alụrụ ọgụ maka agha abụọ ahụ. Ndị pogroms dị na North na 1966 bụ ndị a na-eduzi ndị mmadụ site na Eastern Nigeria.
Agbanyeghi nkwekorita okike n'etiti ndi mmadu a na pogroms na ugwu, esemokwu bilitere dika ndi pere mpe, ndi nwere mmasi mgbe nile inwe obodo nke ha n'etiti ndi isi ochichi nke Naijiria, na-enyo enyo na ha na ndi agha Federal agha imebi Biafra. 
Ndị agha Federal makwara ụta maka mpụ a. N’ógbè Rivers, ndị agha obere gburu agbụrụ pere mpe nwere ọmịiko maka Biafra. Na Calabar, ndị agha Federal gbukwara ụfọdụ Efịk 2000.  Na mpụga Biafra, e dekọrọ arụrụala megide ndị bi na Asaba na Delta State ugbu a site n'akụkụ abụọ nke esemokwu ahụ.  
Ntinye aka mba ụwa Britain Britain emeela atụmatụ ịkwado na ịgbasawanye mmanụ ya dị oke ọnụ ala sitere na Nigeria. Ya mere, ọ butere ihe dị mkpa na mmezi nke mmịpụta mmanụ na ịrụzigharị ọrụ. Agha ahụ dara naanị otu izu tupu Agha Sixbọchị isii na Middle East dugara na Suez Canal na-egbochi, na-amanye ndị na-ebu mmanụ site na Middle East iji jiri ụzọ dị ogologo gburugburu Cape of Good Hope, si otú ahụ na-abawanye ụgwọ nke Middle East mmanụ.  N'aka nke ya, nke a mere ka mkpa mmanụ Naịjirịa dị na Britain, nke dị ọnụ ala karịa mmanụ si na Osimiri Peshia.  Na mbu, mgbe amachaghị akụkụ ga-emeri, Britain were "chere ma hụ" ụzọ tupu ya ekpebie maka Naịjirịa kpamkpam.  Naịjirịa nwere ụgbọ mmiri nwere naanị ụgbọ mmiri iri isii, nke kachasị n’ime ha bụ frig; otu ụgbọ elu nke ụgbọ elu 76, nke ọ bụla n'ime ha anaghị alụ ọgụs ma ọ bụ bọmbụ; na ndị agha 7,000 ndị na-enweghị tankị na ụkọ ndị ọrụ nwere ahụmịhe iwu. Agbanyeghi na Biafra adighi ike n'otu aka ahu, akuku abuo putara otu ihe dika ha malitere na mbu agha ahu, na mmeri nke Naijiria adighi uzo kwesiri.
Britain kwadoro Federal Government mana, mgbe agha ahụ dara, dọrọ ha aka na ntị ka ha ghara imebi nrụnye mmanụ ndị Britain na East. Ọrụ mmanụ ndị a, n'okpuru ọchịchị Shell-BP Petroleum Development Company (nke Shell na British Petroleum jikọtara ọnụ), na-achịkwa 84% nke gbọmgbọm 580,000 nke Nigeria kwa ụbọchị. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mmanụ a sitere na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ, na otu ụzọ n'ụzọ atọ ọzọ site na mpaghara Mid-West mepụtara ọhụrụ. Otu ụzọ n'ụzọ ise nke mmanụ Naijiria niile biri na Britain.  Na 1967, 30% nke mmanụ a na-ebubata na Britain si na Nigeria. 
Ya mere Shell-BP ji nlezianya leba anya na gọọmentị etiti na-arịọ ka ọ jụ ịkwụ ụgwọ ụgwọ ala Biafra chọrọ. Ndị ọkaiwu ya nyere ndụmọdụ na ịkwụ ụgwọ Biafra ga-abụ ihe kwesiri ma ọ bụrụ na gọọmentị a mere n'ezie ka iwu na usoro dịrị na mpaghara a na-ekwu okwu. Gọọmentị Britain nyere ndụmọdụ na ịkwụ Biafra nwere ike imebi ihu ọma gọọmentị etiti. Shell-BP kwụrụ ụgwọ ahụ, gọọmentị wee guzobe mgbochi na mbupụ mmanụ.  N'ịbụ ndị a manyere ịhọrọ otu akụkụ, Shell-BP na gọọmentị Britain tinyere aka na Federal Government na Lagos, o doro anya na ịgbakọ na akụkụ a ga-emeri agha ahụ.  Dika onye isi ochichi British na Lagos degara onye ode akwukwo nke ndi Commonwealth Affairs na 27 July 1967:
Ojukwu, ọbụlagodi mmeri, agaghị anọ n’ọnọdụ siri ike. Ọ ga-achọ enyemaka na nkwado mba ụwa niile ọ nwere ike ịnweta. Gọọmentị etiti ga-adị mma karịa ma mba ụwa ma n'ime. Ha ga-enwe okwu nkedo maka ọgwụgwọ kachasị njọ nke ụlọ ọrụ nke nyere onye nnupụisi aka, enwere m obi ike na ha ga-agbachitere ikpe ha ruo ogologo oge ịkagbu ikike ụlọ ọrụ na ịme ka nrụnye ha dị. Ekwubiri m, ya mere, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ agbanwee obi ya wee rịọ gọọmentị Britain maka ndụmọdụ, ihe kachasị mma a ga-enye bụ ka ọ jiri ọsọ ọsọ laghachi n'akụkụ Lagos nke ngere ahụ na akwụkwọ ndenye na njikere. "[139 ]
Shell-BP nara ndụmọdụ a.  Ọ gara n'ihu na-akwado nwayọ na-akwado Nigeria site na agha ndị ọzọ, n'otu oge na-akwado eze nke of 5.5 nde iji kwụọ ụgwọ ịzụta ngwa agha ndị Britain ọzọ. 
Ọ bụ mgbe ndị agha Federal jidere ọdụ mmanụ mmanụ dị na Bonny na 25 Julaị 1967 ka Mịnịsta Ala Britain Harold Wilson kpebiri iji aka ndị agha kwado Nigeria.  Mgbe mmeri Federal meriri na Bonny, Wilson kpọrọ David Hunt, onye kọmishọna ukwu Britain na Nigeria, maka nzukọ na 10 Downing Street na mbido August 1967 maka nyocha ya banyere ọnọdụ ahụ.  Echiche Hunt na ndị agha Federal bụ ndị ahaziri nke ọma na ha ga-emeri n'ihi na ha nwere ike ịdakwasị ọnụ ọgụgụ buru ibu dugara Wilson n'akụkụ Nigeria.
N'oge a na-alụ agha ahụ, Britain zoro ezo na-ewepụta ngwa agha na ọgụgụ isi nke ndị agha na Naịjirịa, o nwekwara ike ịbụ na ha nyekwaara ya aka ịkpọ ndị ọrụ agha. Ka emechara mkpebi a iji kwado Naịjirịa, BBC gbadoro ụkwụ n'akuko ha iji kwado otu a.  Ihe enyere ndi Federal Military Government gụnyere ụgbọ abụọ na ụgbọ ala 60. 
Na Britain, ọrụ enyemaka gbasara enyemaka Biafra malitere na 12 June 1968, na mgbasa ozi mgbasa ozi na ITV na The Sun. N'oge na-adịghị anya e nyefere ndị ọrụ ebere ndị ọrụ ebere Oxfam na Save the Children Fund, ka ha nwere nnukwu ego. 
France France nyere ngwa agha, ndị agha na-ebu agha, na enyemaka ndị ọzọ nye Biafra ma kwalite ihe kpatara ya na mba ụwa, na-akọwa ọnọdụ ahụ dị ka mgbukpọ agbụrụ. Onye isi ala Charles de Gaulle rụtụrụ aka na "Biafra bụ ihe ziri ezi na ezigbo ọrụ".  Ka osi di, France anabataghi Biafra site na diplomaati.  Site n'aka Pierre Laureys, o doro anya na France enyela B-26s abụọ, helikopta Alouette, na ndị ọkwọ ụgbọelu.  France wepụtara Biafra ngwa agha German na nke Italiantali weghaara site na Agha IIwa nke Abụọ, na-enweghị nọmba ọnụọgụ, ewepụtara dị ka akụkụ nke mbupu mgbe niile na Côte d'Ivoire.  France resịkwara gọọmentị etiti Naịjirịa ụgbọ agha na-ebu agha. 
Enwere ike ileba anya na ndị France na agha ahụ na usoro atụmatụ ya (Françafrique) na asọmpi ya na ndị Britain na West Africa. Naịjirịa nọchitere anya otu okpukperechi Britain na mpaghara a na-ejikọkarị ndị France. France na Portugal jiri mba ndị dị nso na mpaghara nke ikike ha, ọkachasị Côte d'Ivoire n'okpuru Onye isi ala Félix Houphouët-Boigny, dị ka ụzọ esi ebuga Biafra.   Ruo n'ókè ụfọdụ, France kwughachiri iwu ya na mbụ site na Nsogbu Congo, mgbe ọ na-akwado mwepu nke mpaghara ndịda na-egwupụta ihe na Katanga. 
Na onodu aku na uba, France nwetara mkpali site na nkwekorita mmanu maka Société Anonyme Française de Recherches et d'Exploitation de Pétrolières (SAFRAP), o doro anya na ya na Eastern Nigeria haziri tupu ya ekewapụ ya na Federation nke Nigeria.   SAFRAP kwuru na ọ bụ pasenti asaa nke mmanụ ụgbọ ala Naịjirịa.  Na ntule nke onye nyocha CIA na 1970, France “nyere nkwado n’ezie maka ndị Biafran bourgeoisie na nkwụghachi maka mmanụ.”  Biafra, n’akụkụ ya, gosipụtara n’ụzọ doro anya mmekọrịta ya na France. Ojukwu tụrụ aro ka abalị iri nke ọnwa asatọ nke ọnwa asatọ n’afọ 1967, ka Biafra webata klas ndị French amachibidoro n’ụlọ akwụkwọ sekọndrị, teknụzụ na ndị nkuzi iji “rite uru n’ọdịbendị bara ụba nke mba na-asụ French”.
France buru ụzọ ụzọ nkwado mba Biafra maka mba ụwa.  Portugal zigakwara ngwá agha. A haziri azụmahịa ndị a site na "Biafran Historical Research Center" na Paris.  Ndi agha France na ndi Gabon na Côte d'Ivoire nabatara Biafra na Mee 1968.  Na 8 May 1968, De Gaulle n'onwe ya nyere 30,000 franc maka ịzụrụ ọgwụ maka ọrụ French Red Cross. Nsogbu ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ zuru oke ebe niile dọpụrụ uche gọọmentị nwa oge. Gọọmentị kwupụtara mmachibido iwu nke agha mana ọ nọgidere na-ebuga Biafra n'okpuru nchekwa enyemaka.  N’ọnwa Julaị gọọmentị megharịrị mgbalị ya iji mee ka ọha na eze tinye aka n’ihe gbasara ọdịmma ndị mmadụ. Ihe osise nke ụmụaka agụụ na-ebo na ebubo nke mgbukpọ agbụrụ jupụtara na akwụkwọ akụkọ France na mmemme televishọn. N'ime ụlọ ọrụ mgbasa akụkọ a, na 31 Julaị 1968, De Gaulle kwupụtara nkwupụta gọọmentị iji kwado Biafra.  Maurice Robert, onye isi nke Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage (SDECE, ndị ọrụ nzuzo ndị si mba ofesi na France) Ọrụ Africa, dere na 2004 na ụlọ ọrụ ya nyere ndị nta akụkọ nkọwa gbasara agha wee gwa ha ka ha jiri okwu a bụ "mgbukpọ" na akụkọ ha. 
France kwupụtara "Izu Biafra" na 11-17 Maachị 1969, nke dị na ọgba aghara 2-franc nke ndị French Red Cross mere. N’oge na-adịghị anya, de Gaulle kwụsịrị mbubata ngwá agha, wee gbaa arụkwaghịm na 27 Eprel 1969. Onye isi ala nke oge ahụ Alain Poher chụrụ Ọchịagha Jacques Foccart, onye isi nhazi nke amụma Africa na France. Georges Pompidou weghaara Foccart ego ọzọ ma malitekwa nkwado maka Biafra, tinyere imekọ ihe ọnụ na ndị ọrụ nzuzo nzuzo South Africa ibubata ọtụtụ ngwa agha. 
United States United States kwuputara nnọpụiche, onye odeakwụkwọ nke United States Dean Rusk na-ekwu na "America anọghị n'ọnọdụ ịme ihe dịka Naịjirịa bụ mpaghara n'okpuru ọchịchị Britain".  Dị ka iwu si kwuo, United States nọpụrụ iche n'agha obodo. Ebumnuche, ọdịmma ya kwekọrọ na Gọọmentị ndị agha Federal, n'agbanyeghị na enwere nnukwu echiche ama ama na nkwado Biafra. United States hụkwara uru na njikọ ya na Lagos, ma chọọ ịchekwa $ 800 nde (na nyocha nke Ngalaba Ọchịchị) uru nke itinye ego nke onwe. 
Na 9 Septemba 1968, nwa akwukwo onye isi ala United States Richard Nixon kwuru, sị:
Ruo ugbu a, mbọ iji nyere ndị Biafra aka bụ na akụ afọ n'ala site n'ọchịchọ nke gọọmentị etiti ala Nigeria ịchụso mmeri zuru oke na enweghị atụ yana egwu ndị Ibo na inyefe pụtara oke arụrụala na mgbukpọ agbụrụ. Ma mgbukpọ bụ ihe na-eme ugbu a - agụụ bụkwa ihe na-eweta ihe ubi. 
Mgbe Nixon ghọrọ onye isi ala na 1969, ọ chọpụtara na o nwechaghị ihe ọ ga-eme iji gbanwee mkpebi siri ike ewezuga ịkpọ oku maka mkparịta ụka udo ọzọ. Na agbanyeghị nke a, ọ gara n’ihu na-akwado Biafra n’onwe ya. 
Gulf Oil Nigeria, nke atọ bụ nnukwu onye na-egwu mmanụ na Naịjirịa, na-ewepụta 9% nke mmanụ na-apụta na Nigeria tupu agha ebido.  Ọrụ ya niile dị n'ụsọ osimiri nke etiti etiti ọdịda anyanwụ na-achịkwa; ya mere ọ gara n’ihu na-akwụ gọọmentị etiti ụgwọ ọrụ maka ọrụ ya na nke a anaghị egbochi ya. 
Soviet Union Soviet Union kwadoro gọọmentị Nigeria nke ukwuu, na-ekwusi ike myirịta na ọnọdụ Congo. Ọchịchọ Naịjirịa chọrọ inwe ụgbọ elu, nke Britain na United States jụrụ ire, mere Gowon ịnabata onyinye ndị Soviet nyere n'oge ọkọchị nke 1967 iji ree ndị agha 17 nke ndị agha MIG-17.  Ndị agha Naijiria a zụrụ azụ na Britain echeghị ntụkwasị obi na Soviet Union, mana onye nnọchi anya Soviet na Lagos, Alexander Romanov, nwoke nwere mmekọrịta enyi na enyi yana onye nnọchi anya gọọmentị mara mma, sooro Gowon nwee mmekọrịta dị mma ma kwenye na ịnakwere ngwa agha Soviet agaghị apụta ido onwe anyị n'okpuru Soviet Union.  Ndị MIG-17 nke izizi rutere Naịjirịa n'ọnwa Ọgọst 1967, ya na ihe dịka ndị ọkachamara Soviet Soviet 200 iji zụọ ndị Naịjirịa maka ojiji ha.  Agbanyeghị na ndị MIG-17s bịara bụrụ ndị ọkaibe nke ukwuu ka ndị Naịjirịa jiri nke ọma, na-achọ ka ndị ọkwọ ụgbọ elu nke Egypt Air Force gba ha ọsọ, nkwekọrịta ogwe aka Soviet-Naịjirịa ghọrọ otu n'ime isi ntụgharị agha ahụ.  Na mgbakwunye na ịtọpụta ogwe aka site na Soviet Union na Nigeria, ohere nke Soviet Union ga-enwe nnukwu ikike na Nigeria mere ka Britain gbakwunye ngwa agha ya iji jigide mmetụta ya na Lagos mgbe ọ na-ewepụ ohere nke United States ma ọ bụ Britain nwere ike ịnata Biafra. 
Soviet Union weputara Nigeria oge niile na ngwa agha, site na nkwuputa ndọrọ ndọrọ ọchịchị na "ndị a bụ maka ego na azụmaahịa". Na 1968, USSR kwenyere ịkwụ ụgwọ Kainji Dam na Niger (obere ihe si Delta). Ndị mgbasa ozi Soviet mbụ boro ndị Britain ebubo na ha ji nlezianya na-akwado nkewa Biafran, mgbe ahụ ha mezigharịrị ebubo ndị a mgbe emechara mgbe Britain mechara, na-akwado gọọmentị etiti. 
Otu nkọwa maka ọmịiko ndị Soviet nwere na gọọmentị Federal ndị agha bụ mmegide megidere mmegharị nkewa nke ime. Tupu agha ahụ, ọ ga-abụrịrị na ndị Soviet nweere ndị Igbo ọmịiko. Mana Prime Minista Soviet bụ Alexei Kosygin kwuru na iwe were ha n'October 1967 na "ndị Soviet ghọtara nke ọma" ebumnobi Naịjirịa na mkpa ọ dị "iji gbochie mba ahụ ịkpụtu." 
Akụkọ kwuru na agha ahụ mere ka mmekọrịta mba na mba na Soviet na azụmahịa dịkwuo mma, ụgbọ ala Moskvitch bidoro pụta na Lagos. USSR ghọrọ onye mbata asọmpi nke kọfị Naijiria. 
China Ebe ọ bụ na Soviet Union bụ otu n'ime ndị na-akwado Naịjirịa, na-ebunye ngwa ahịa n'ọtụtụ ihe, China kwupụtara nkwado ya maka Biafra.  Na nkwupụta izizi mbụ ya banyere agha ahụ na Septemba 1968, New China Press Agency kwuru na ndị mmadụ Republic of China kwadoro nkwado ziri ezi maka mgbapụta maka nnwere onwe nke ndị Biafra megide gọọmentị Naịjirịa nke "Anglo-American imperialism na Soviet revisionism" kwadoro.  China kwadoro ngwa agha Biafra site na Tanzania, na-ebunye ngwa agha ruru nde $ 2 na 1968-1969. 
Israel Site na mbido, Israel ghọtara na Naịjirịa ga-abụ onye egwuregwu dị mkpa na ndọrọndọrọ ọchịchị ọdịda anyanwụ Afrịka, wee hụ ezigbo mmekọrịta na Legọs dịka ebumnuche dị mkpa nke mba ofesi. Nigeria na Israel guzobere njikọ na 1957. Na 1960 Britain kwere ka e mepụta ndị ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Israel na Lagos, Israel wekwaara gọọmentị Nigeria ego $ 10. Izrel mekwara mmekọrịta chiri anya na ndị Igbo dabere na ọdịnala nwere ike ịkekọrịta. Ihe ndị a gosipụtara nnukwu ihe ịga nke ọma na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nyere usoro ndị Alakụba nke gọọmentị ugwu na-achịkwa. Fọdụ ndị ndu mgbago ugwu ekwetaghị ịkpọtụrụ Israel na machibidoro ndị Israel si Maiduguri na Sokoto iwu.
Israel amaliteghị irere Naịjirịa ngwa agha rue mgbe Aguyi-Ironsi batara n’ọchịchị na 17 Jenụwarị 1966. A na-ahụta nke a dịka oge dabara adaba iji mepụta mmekọrịta a na gọọmentị etiti. Ram Nirgad ghọrọ onye nnọchi anya mba Izrel na Naịjirịa n'ọnwa Jenụwarị. E nyefere iri tọn iri atọ na Eprel. 
Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ malitere ịchọ enyemaka site na Israel na Septemba 1966. O doro anya na Israel jụrụ arịrịọ ha ugboro ugboro, ọ bụ ezie na ha nwere ike ime ka ndị nnọchi anya Biafran ahụ kpọtụrụ onye na-ere ahịa ngwa agha ọzọ.  Na 1968, Israel malitere inye Federal Government Military ngwá agha — ihe dị ka $ 500,000, dị ka Ngalaba Ọchịchị nke United States si kwuo. Ka ọ dị ugbua, dịka n’ebe ndị ọzọ, akpọsara ọnọdụ na Biafra dịka mgbukpọ agbụrụ. Ndị Knesset rụrụ ụka n'ihu ọha okwu a na 17 na 22 July 1968, na-emeri otuto site na ndị nta akụkọ maka mmetụta uche ya. Ndi otu ndoro-ndoro ochichi na aka-ekpe, na ndi na-achu umu akwukwo kwuru maka Biafra.  N’August 1968, ndị agha nke Israel Air Force zigara tọn iri na abụọ nke enyemaka nri na saịtị dị nso na mpụga ikuku ikuku Nigeria (Biafran). Na nzuzo, Mossad nyere Biafra $ 100,000 (site na Zurich) wee nwaa ibufe ngwa agha. N'oge na-adịghị anya, Israel mere ndokwa iji ụgbọ elu njem Côte d'Ivoire bufee ngwá agha nzuzo na Biafra. Mba ndị dị na Sahara Africa gbara mbọ ịkwado ndị Arab na esemokwu Israel na Palestian site na ịtụ vootu maka mkpebi ndị mba Arab na-akwado na United Nations.  Otu ebumnuche bụ isi nke diplọmaị nke Israel bụ iwepụ mba ndị dị n'Africa pụọ ​​na steeti Arab, ma nyekwa ụzọ ka ọtụtụ mba Afrịka si kwado Naịjirịa, Israel kpọrọ asị imegide ha site na ịkwado Biafra kwa oke. 
Ijipt Onye isi ala Gamal Abdel Nasser zipụrụ ndị ọkwọ ụgbọ elu nke ndị agha ụgbọ elu nke Egypt ka ha buso Naịjirịa agha na Ọgọstụ 1967, na-efe ndị MIG-17s rutere nso nso a.  Udiri ndi na-anya ugbo elu Egypt n’enweghi ike itu ogbunigwe n’ime ndi nkiti Biafran abughi ihe bara uru n’agha nduhie n’ihi na ndi Biafra mere ike ha niile ikwusa okwu banyere ndi nkiti ndi Egypt gburu.  N’oge opupu ihe ubi nke 1969, ndị Nigeria jiri ndị ọkwọ ụgbọ mmiri East German dochie anya ndị isi ụgbọ elu Egypt bụ ndị gosipụtara na ha nwere ezigbo ikike. 
Canada N’arịrị gọọmentị Naịjirịa rịọrọ, Canada zigara mmadụ atọ ka ha mee nchọpụta ebubo nke mgbukpọ na mpụ agha megide ndị agha Naijiria. Major General W.A. Milroy sonyeere ndị ọrụ Canada abụọ ndị ọzọ na 1968, ndị agha Canada wee ruo na February 1970. 
Mba ndị ọzọ Biafra rịọrọ arịrịọ na-enweghị isi maka nkwado site na Organizationtù Na-ahụ Maka Africandịkọ nke Africa, agbanyeghị na mba ndị otu a n’ozuzu ha achọghị ịkwado mmegharị nkewa nkewa,  n’agbanyeghi na ha nwetara nkwado nke mba Africa dịka Tanzania, Zambia, Gabon na Côte d’Ivoire. Ọtụtụ mba Africa ndị megidere nkewa dị ka Etiopia na Egypt kwadoro gọọmentị Naịjirịa iji gbochie nnupụisi na-akpali akpali na mba nke ha. Flag of the Republic of Benin This was due to the pre-secession arrangement that all soldiers should return to their regions to stop the spate of killings, in which Igbo
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Naijeria&oldid=68352
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 22 Ọnwa atọ 2021, mgbe 16:36